Firmware တင်နည်းများ : Myanmar Mobile Software Developer
Category: Firmware တင်နည်းများ
Sony FTF File Creat Using Flashtool !
” Sony ” အသုံးပြုသူများ အခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့ Firmware ဒေါင်းလို့ အဆင်မပြေတာတွေ လိုချင်တဲ့ Model တွေမတွေ့ တာတွေ နဲ့လိုချင်တာအဆင်မပြေတာတွေ အတွက် ဒီပိုစ့်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကတော့ ” SUS ” Sony Update Service တို့Xperiafirm.exe တို့ အသုံးပြုပြီးဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ဖိုင်များကို “Flashtool ” အသုံးပြုပြီး FTF ဖိုင်များပြန်လည်ပြုလုပ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် “SUS” အသုံးပြုသူများကတော့ လုပ်မယ့်ဖုန်းလေးနဲ့ အင်တာနက်လိုပါတယ် Xperiafirm.exe အသုံးပြုသူတွေကတော့ အင်တာနက်လေးပဲလိုပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ ” Xperiafirm.exe ” လေးသုံးပြီးဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ဖိုင်လေးနဲ […]
“Nokia ” ဖုန်းလေးတွေရဲ့Flash File တွေကို တနေရာတည်းမှာစုစည်းထားတဲ့ဆိုက်လေး တဆိုက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဗျာ……. ဖုန်းတော်တော်များများလည်းစုံတယ်ဗျာ… ပါဝင်တာတွေကတော့ – NOKIA 100 – RH-130/ NOKIA 100 – RH-131/ NOKIA 101 – RM-769/ NOKIA 108 – RM-945/ NOKIA 108 Dual SIM – RM-944/ NOKIA 110 – RM-827/ NOKIA 1100.RH-18/ NOKIA 1100.RH-36/ NOKIA 1100.RH-38/ NOKIA 1101.RH-75/ NOKIA 111 RM-810/ NOKIA 1110.RH-70/ […]
Xperia Z1 Compact ( D5503 ) 4.4.A.0.108_RU(4.4.4) Firmware
ကဲ…….. ” Sony User ” တွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ Android Verison 4.4.4 တော့ ထွက်ရှိလို့ လာပါပြီဗျာ……အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” Xperia Z1 Compact D5503 ” ရဲ့ 4.4.4 Firmware လေး upload ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ……… လိုင်းကောင်းသူများကတော့ mega link ကနေဒေါင်းပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ…. Download ( Z1 Compact 4.4.4 Firmware ! ) Mega Link Download ( Z1 Compact 4.4.4 Firmware ! […]
Huawei G610-U00 Build Number 916 Firmware !
June 16, 2014 |3Replies
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Huawei G610-U00 ရဲ့Build Number 916 Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ……. လိုအပ်သူများဒေါင်းလိုက်ကြပါအုန်းဗျာ……… Download ( G610-U00 ) Build Number 916 အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ….. [email protected]
Huawei RU Firmware များစုစည်းမှု
Huawei ရဲ့Russia firwmare တွေ ရှာရတာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ဘော်ဒါများအတွက် Huawei Device RU မှ ပြန်လည်ကူးယူပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်သူများဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ…….. Huawei Ascend D1 U9500-1 ——————————— Huawei Ascend D1 U9500-1 V100R001C00B221 Normal ( Download ) ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ exe file လေး Run ပေးပါ Huawei Ascend D1 U9500-1 V100R001CHNC00B710 China ( Download ) ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ exe file လေး Run ပေးပါ […]
How To Use Sony Flashtool Beginner Guide !
May 21, 2014 |2Replies
လေ့လာနေတဲ့ဘော်ဒါတော်တော်များများ အခုနောက်ပိုင်း အမေးများနေလို့ဒီနည်းလမ်းလေးပြောပြပေးတာပါ တကယ်တန်း ကျွန်တော်လည်း သိပ်မသိပါဘူး သိသလောက်လေးတော့ပြန်လည်ဝေမျှပေးပါ့မယ် ” Sony User ” တော်တော် များက ဒီနာမည်လေးတွေ့ တာနဲ့ တန်းသိမယ်လို့ ထင်ပါတယ် တော်တော်များများကလည်း ဒီကောင်လေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေ သိပ်မသိတာများပါတယ်ဗျာ… Basic Knowledge အနေနဲ့ မှတ်ထားရမှာတော့ flashmode မှာအသုံးပြုလို့ ရတဲ့ Function အပိုင်းတွေကတော့ 1) flash any sony ericsson firmware (FTF files) 2) flash sony ericsson offical kernals (SIN files) without flashing hole firmware 3) flash […]
ZTE N790-B01 Firmware တင်နည်း
zaw linn |
May 19, 2014 | 1 Reply
ညီလေးတစ်ယောက်တိုင်ပါတ်နေလို့ ကူပြီးတိုင်ပါတ်ပေးထားတဲ့ ZTE N790 Firmware တင်နည်းလေးပါ တခါကတော့ သားဂျူးနဲ့တိုင်ပါတ်ဖူးပါတယ် ZTE N790 က နှစ်မျိုးလာပါတယ် ZTE N790 ရိုးရိုးနဲ့ ZTE N790-B01 ဆိုပြီးတော့ အခုကောင်လေးက ZTE N790-B01 တင်နည်းပါ ရိုးရိုး ZTE N790 က Update.zip နဲ့ တင်လို့ရပါတယ်။ ကဲလိုတာတွေ Down ပါ့မယ်..။ (1).Tool Down ရန် ; http://www.mediafire.com/download/8roxt88m8dd00fn/Sales_MultiDL_MSM7627_V1.00.03.7z (2).Driver Down ရန် ; (3).Firmware Down ရန် ; http://www.mediafire.com/download/4cz9v7c66v8e0o6/N790_20130329.zip […]
Xperia SP ( C5303 ) 12.1.A.1.201_CH (4.3 ) Firmware !
May 14, 2014 | 1 Reply
” Xperia SP ” C5303 ရဲ့” 4.3 ” Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်သူများ ဒေါင်းလိုက်ကြပါဗျာ…. လိုင်းကောင်းသူများကတော့ Mega Link ကဒေါင်းပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ…. Download ( Xperia SP Firmware ) Mega Link Download ( Xperia SP Firmware ) Pcloud Link အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…….. [email protected]
Xperia M2 D2305 18.0.A.1.30 ( 4.3 ) Firmware !
May 13, 2014 | 1 Reply
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” Xperia M2 ” ရဲ့Firmware လေးတင်ပေးချင်ပါတယ် ဒီ Firmware လေးကိုတော့ ကိုစိုင်းအာကာ က တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ…. လင့်နှစ်လင့် တင်ပေးထားပါတယ် တလင့်က Original Mega Link နဲ့ပြန်တင်ပေးထားတဲ့ Pcloud Link နှစ်လင့် ဖြစ်ပါတယ် ဒေါင်းလိုက်ကြပါအုန်းဗျာ……… Download ( Xperia M2 ) Mega Link Download ( Xperia M2 ) Pcloud Link Credit To : Sai Arr Kar အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…..[email protected]